အာလာဒင် - ဝီကီပီးဒီးယား
အာလာဒင် ဂူအတွင်၌ အံ့ဖွယ်မီးခွက်ဆန်းကို ရှာတွေ့ပုံ။
Aarne-Thompson အရ အုပ်စုခွဲခြင်း
အော်န်ထွိန်း ဂဲလွန် ဘာသာပြန်သော တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်များ စာအုပ်။
အာလာဒင် (အင်္ဂလိပ်: Aladdin; အာရပ်: علاء الدين‎ , /အာလားဒင်/ ၊ /အာလာ့အို့ဒင်း/ ) သည် ရိုးရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏ မူရင်းစာပေဖြစ်နိုင်သည်။ မူလ အာရေးဘစ်စာပေဖြစ်သော 'တစ်ထောင့်တစ်ည' (အာရေးဘီးယန်းညများ) စာအုပ်၏ အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း ယင်းစာစုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်သား အော်န်ထွိန်း ဂဲလွန် (Antoine Galland) က ဆီးရီးယားနယ်ဘက်မှ ခရစ်ယာန် မဲရန်နိုက်ဂိုဏ်း ပုံပြောသူ ဟာနာ ဒီယတ်ဘ် ဆီမှ ရယူကာ ဤပုံပြင်ကို ပြင်သစ်ဘာသာပြန် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင် (Les mille et une nuits) တွင် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။
ထင်ရှားသောမူနှစ်ခုရှိရာ ဂဲလွန် နှင့် ဘာတန် (Burton) တို့ဖြစ်သည်။ မူနှစ်ခုစလုံး၌ ဤဇာတ်လမ်း၏ အဖွင့်ဝါကျများတွင် 'တရုတ်ပြည်၏ မြို့တော်တစ်ခုတွင်' ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။ သို့ရာတွင် ဇာတ်လမ်းပါအကြောင်းအရာများသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်း အခြေတည်ပုံစံနှင့်သာ လက်တွေ့အားဖြင့် ကိုက်ညီသည်။ ဇာတ်လမ်း၌ပါရှိသော ဘုရင်ကို ဆူလ်တန် ဟုသာဖော်ပြပြီး တရုတ်တွင်သုံးသော ဧကရာဇ် ဟု ရေးသားထားခြင်းမရှိပေ။ အချို့သော ပြန်ပြောမူအချို့တွင် ဧကရာဇ်ဟု သုံးနှုန်းထားကြသည်။ ဇာတ်လမ်းပါ လူများမှာ မွတ်စလင်များနှင့် စကားသုံးနှုန်းမှုမှာလည်း ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော မွတ်စလင်များ၏ ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုများဖြစ်၏ ။ ဂျူးလူမျိုး ကုန်သည်က အာလာဒင်၏ ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ၍ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်စွာ လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟု ပါရှိသော်လည်း တရုတ်ပြည်ဘာသာရေးများဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊ ကွန်ဖြူးရှပ်စ်ဝါဒဝင်များ အကြောင်း၊ ပို၍ထင်ရှားသည်မှာ တရုတ်လူမျိုးများအကြောင်း ပါဝင်မှု မရှိပေ။
သိသိသာသာဖြင့် တရုတ်တိုင်းရင်းသားများသမိုင်းတွင် မွတ်စလင် (တရုတ်မွတ်စလင်) အုပ်စုများအကြောင်း ရှည်ကြာစွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ဥပမာ ဝီးဂါ (ဝီးဂွတ်ယာဇ်) (Uighurs) လူမျိုးများ ဟွေလူမျိုးများ တို့၏ မူလဇာစ်မြစ်သည် ပိုးလမ်းမခရီးသွားသူများဖြစ်သည်။ ထန်မင်းဆက် လက်ထက်ကတည်းက အစ္စလာမ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသည် ယင်းဒေသများ၌ တည်ရှိခဲ့ကြ၍ အချို့က ဇာတ်လမ်းအခြေတည်သည်မှာ တာကစ်စတန် ဒေသကြီး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ညွှန်းဆိုကြသည်။
ဤအချက်များကြောင့် တရုတ်ပြည်တွင် ဇာတ်လမ်းအခြေတည်သည်ဟူသေယ တွက်ဆခန့်မှန်းမှုသည် ရိုးရာပုံပြင်ပြောသူတစ်ဦး၏ တရုတ်ပြည်နှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိမှုတစ်စိတ်တပိုင်း ချို့တဲ့ခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရှေးခေတ် အာရေးဘစ်သုံးနှုံးမှုများတွင် အလွန်ကွာဝေးသော မရင်းနှီးသည့်နယ်မြေတစ်ခုကို ဖော်ပြရာ၌ တရုတ်ပြည် ဟူ၍ သုံးနှုန်း ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
↑ Razzaque (2017)
↑ Plotz (2001) p. 148–149
↑ Moon (2005) p. 23
↑ Honour (1973) - Section I "The Imaginary Continent"
↑ Arafat A. Razzaque။ Who was the “real” Aladdin? From Chinese to Arab in 300 Years။
↑ Olivia B. Waxman (2019-05-23)။ Was Aladdin Based onaReal Person? Here’s Why Scholars Are Starting to Think So။
Honour၊ Hugh (1973)။ Chinoiserie: The Vision of Cathay။ Ican။ ISBN 978-0064300391။
Moon၊ Krystyn (2005)။ Yellowface။ Rutgers University Press။ p. 23။ ISBN 0-8135-3507-7။
Plotz၊ Judith Ann (2001)။ Romanticism and the vocation of childhood။ Palgrave Macmillan။ ISBN 0-312-22735-3။
Razzaque၊ Arafat A. (10 August 2017)။ Who wrote Aladdin?။ Ajam Media Collective။ 25 February 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာလာဒင်&oldid=541283" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၂၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။